​पुरुषभन्दा महिला किन धेरै बाँच्छन् ? गर्भमा पनि पुरुष भ्रुण नै बढी खेर जाने कारण के होला ?
Tuesday,5Feb, 2019 12:59 PM
२२ माघ, काठमाडौं । संसारभर नै महिलाहरूको औसत उमेर पुरुषको भन्दा बढी छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार सन् २०१६ मा जन्मिने मानिसहरू ७२ वर्षको औसत आयु लिएर जन्मिएका छन्। यो तथ्याङ्क लिङ्गका आधारमा औसत आयु छुट्टाउँदा भने महिलाको ७४ वर्ष दुई महिना र पुरुषको ६९ वर्ष आठ महिना भएको उल्लेख छ । एक सय वर्षभन्दा बढी जिउने महिलाको संख्या पुरुषका तुलनामा बढी हुन्छ । सन् २०१० को अमेरिकी जनगणनामा अमेरिकाका एक सय वर्षभन्दा माथि उमेरका ५३ हजार ३ सय ६४ जना थिए । उनीहरूमध्ये ९ हजार १ सय ६२ जना पुरुष र ४४ हजार २ सय २ जना महिला थिए । किन पुरुषभन्दा महिला बढी बाँच्छन् त ? उनीहरूलाई के ले पुरूषभन्दा लामो जिउन सहयोग गर्छ ?
► १. जीन
►३. पेशा र आचरण
ब्रिटेनमा महिला र पुरुषको आयु दुई दशकमा बराबर आउने बताइएको छ । इम्पेरियल कलेज लण्डनको एक अध्ययनका अनुसार सन् २०३० सम्ममा ब्रिटेनमा महिला र पुरुषबीचको यो दुरी एक वर्ष नौ महिनामा झर्ने बताइएको छ । अहिले ब्रिटेनमा जन्मेको पुरुष ७९ वर्ष दुई महिना बाँच्ने र महिला ८२ वर्ष नौ महिना बाँच्ने तथ्याङ्क छ । प्राध्यापक लेस मेहेउले गरेको एक अध्ययनमा सन् २०३२ सम्ममा महिला पुरुषको आयु बराबर हुने देखाइएको छ । एजेन्सी